Qaab duritaanka - HSR noocooda Co., Ltd.
ABS & ABS-u eg
PC & PC-u eg
PMMA & PMMA-la mid ah
Wax taaj oo kale duritaanka caaga ah, Adeeg Qalab Degdeg ah
Waxaan leenahay daabacaadda 3D ee adduunka hogaamineysa, mashiinka CNC, qalabka wax lagu duubo ee faaruqinta ah, faleebo hooseeya, cirbadeynta cirbadeynta iyo qalab kale, khibrad wax soo saar hodan ah ayaa kaa siin kara naqshadeynta wax soo saarka si aad u xaqiijiso tusaalooyinka, waxsoosaarka degdegga ah ee wax soo saarka tijaabada yar, wax soo saarka ballaaran ee Dragon adeeg. In ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan wax soo saarka caaryada, warshaduhu waxay daboolaysaa korantada, baabuurta, mashiinnada korantada, aaladaha, qalabka korontada, qalabka guryaha, isgaarsiinta iyo dhinacyada kale. Naqshadeynta caaryadu waa sax, badeecaddu waa daxal u adkaysiga, waxay leedahay awood wanaagsan iyo nolol adeeg dheer, waxayna ku siin kartaa wax ku shubista duritaanka xirfadeed.
Xakamado kala duwan oo balaastig ah ayaa laga dooran karaa HSR. Qalabkeena degdega ah ee P20 wuxuu soo saari karaa 50 ilaa 50,000 + qaybo la dhammeeyay si kasta oo ay u yar yahiin ama u weynaadaan.
Caaryada cirbadaha waxaa laga samayn karaa birta P20, NAK80,718H, S136 iwm. Waxay ku saleysan tahay caaryadaada cimri dhererkeeda iyo qayb ka mid ah waxyaabaha. Qiyaasta waxaa lagu qeexi karaa VDI 3400 ama Mold-Tech iwm
Kooxdayadu waxay ku siin karaan talo DFM ka hor inta aan la soo saarin.
DFM Waxay Bixisay Kahor Sameynta Caaryada
Adeegga wax taaj oo kale ee balaastigga ah ee HSR ayaa bedel fiican u ah caadooyinka wax soo saarka ballaaran. Waxaan ka helnaa 3D CAD-gaaga xogta iyo sawirada si ay kuu siiso oraah, tani waxay qaadan doontaa oo keliya 24-48 saacadood. Ka dib markaad xaqiijiso amarka, waxaad ka heli doontaa DFM injineerkeena si loo ansixiyo. Marka DFM la dhammeeyo oo qaabka caaryada la isku raaco, oo ay ku jiraan booska iyo nooca irridda, booska ejector biinanka iyo booska khadka lagu kala tago, waxaan bilaabi doonnaa inaan sameyno cirbad cirbad ah oo loogu talagalay wax ka sameysanka.
Waa maxay DFM?
Kahor "jarista birta", waxaan u baahanahay inaan heshiis la galno DFM. DFM waa loo gaabiyey Naqshadeynta Soo-saarista. Waa aalad caadi ah in lagu xaqiijiyo dhammaan faahfaahinta Qaybaha Mindhiciilan ee duritaanka Caaga ama Qaybaha Cadaadiska Ku Dhinta. Tani waxay ka koobnaan doontaa macluumaad ku saabsan faahfaahinta aasaasiga ah sida maadada, birta, nooca caaryada, nambarada godka, heerka yaraanshaha, dulqaadka, waxyaabaha la gelinayo, khadadka kala taga, irbadda duritaanka, booska biinanka jeector, falanqaynta dhumucda derbiga iwm.
HSR waxay siisaa lacag la’aan DFM macaamiisha kasta mar alla markii amarka la dhigo. Mararka qaarkood, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa aasaasiga DFM ee marxaladda oraahda si ay kaaga caawiso inaad wax ka beddesho moodooyinka 3D CAD.
TPE Qaybo Aad u Weyn ayaa la heli karaa
Waxaan soo saari karnaa qaybo dhammaan noocyada balaastikada injineernimada ee waxqabadka sare. Mawduucyada ayaa lagu dari karaa qaybaha sida ku xusan faahfaahintaada. Waxaan sidoo kale bixin karnaa 2 qaybood oo tallaal ah iyo qaybo ka samaysan. Waxaan ku faaneynaa isgaarsiintayada wanaagsan iyo adeegyada macaamiisha
DFM (Naqshadeynta Soo-saarista) waa qayb muhiim ah oo ka mid ah wareegga horumarinta wax soo saarka. Nidaamkani had iyo jeer waxaa ugu wanaagsan ee lagu fuliyaa marxaladda naqshadeynta / nooca, si loo ilaaliyo guud ahaan qiimaha wax soo saarka wax soo saarka ugu yaraan.
Waxaan tan u samayn doonnaa dhammaan mashaariicda qalabka duritaanka oo aan hubin doonno in dhammaan qaybahaagu ay ku habboon yihiin habka wax loo duro ee duritaanka.
Cinwaanka: No.260 Tong'an Yuan, Tong'an Industrial Zone, Xiamencity, 361100, Fujian, Shiinaha